بررسی اپلیکیشن تلگرام طلایی 2020 ؛ هرآنچه باید درباره نسخه جدید طلگرام بدانید! - مجله خبری ای بی سی مگ
Golden Telegram dia iray amin’ireo fampiharana niroborobo taorian’ny fanivanana ny Telegram lehibe tao Iran. Miaraha aminay amin’ny famerenana ny fampiharana Golden Telegram 2020.
Tao anatin’ny fahasahiranan’ny fanivanana Telegram, dia ilay dikan-teny tany am-boalohany no nahazoan’ireo fampiharana tsy ara-potoana sy Iraniana sasany, izay azo natao noho ny loharanom-baovao misokatra an’ny Telegram, no nihaona tamin’ny fankasitrahana lehibe.
Ireo fampiharana tsy ara-dalàna ireo, ny malaza indrindra dia ny Mobogram, Farsi Telegram, ary Golden Telegram, na dia nanana adihevitra be dia be aza izy ireo, indrindra momba ny fiarovana sy ny fahatokisana, fa mba hisorohana ny fanivanana sy hanandrana hampifandray ireo proxy sy VPN, dia nahasarika be izy ireo. ny olona.
Golden Telegram, toa an’i Mobogram sy ny dikan-teny tsy ofisialy hafa, dia manolotra fahaiza-manao manokana sy miavaka ho an’ny mpampiasa, izay maro amin’izy ireo no tsy azo natao raha tsy tamin’ny Telegram tany am-boalohany. Na dia iray amin’ireo iraka avo indrindra amin’ny karazany aza ny telegrama fototra, dia tena mampihena ny fiarahamonina manoloana ny famoronana Iraniana.
Androany ao Tekrato, hijery ny fampiharana Golden Telegram 2020 isika ary hahafantatra ireo endri-javatra farany amin’ity dikan-teny tsy ofisialy Telegram ity.
Famerenana ny fampiharana Golden Telegram 2020
Araka ny antontan’isa ofisialy sy nomena, mihoatra ny 80% amin’ireo mpampiasa Telegram no Iraniana. Na dia, araka ny voalaza tetsy aloha aza, ireo iraka ireo no iraka lehibe indrindra amin’ny karazana azy, any amin’ny firenena maro, ireo iraka mifaninana toa ny WhatsApp, Viber, sy ny toy izany dia any amin’ny ambaratonga ambony amin’ny Telegram.
Any Iran ihany no ambony lavitra noho ireo mpifaninana aminy ny Telegram. Ity olana ity koa dia miseho amin’ny fandinihana ny olana sasany. Ohatra, taloha ela be Fahafantarana ireo fantsona Telegram be mponina kokoa Nolazainay taminareo ihany koa fa noho ny hamaroan’ny mpampiasa Iraniana dia an’ny Iraniana ihany koa ireo fantsona telegrama be mpampiasa indrindra.
Ny lazan’ny Telegram indray, miaraka amin’ny loharano misokatra amin’ity fampiharana ity, dia nanome sehatra tsara ho an’ny sasany hanararaotra izany toe-javatra izany sy ny lazan’ny Telegram mba hanolotra fahaiza-manao samihafa sy hisarihana ny sain’ny mpampiasa. Ireo fampiharana tsy ofisialy ireo, na dia talohan’ny fanivanana Telegram aza, dia nalaza be tao Iran ary nahatratra avo lenta ny lazany.
Ny fanivanana anefa dia nanokatra ny lalana ho azy ireo hanao bebe kokoa, ary amin’izao andro izao dia lasa malaza be ny dikan-teny tsy ofisialy sasany amin’ny Telegram ka toa mpifaninana amin’ny Telegram tany am-boalohany.
Amin’ny fanohizana ity kabary ity dia mikasa ny hijery ny fampiharana Golden Telegram 2020 izahay. amin’ny vitantsika ny maka tahaka Miaraha amiko.
لیست قیمت گوشی سامسونگ امروز 18 آنلاین 1400
Telegram Golden na Advanced Telegram Telegram Talaei, serivisy lehibe amin’ny fampiharana Telegram lehibe, dia mampiasa API Telegram ho an’ny daholobe sy maimaim-poana ary mifandray mivantana amin’ny mpizara Telegram lehibe.
Golden Telegram (Advanced Telegram) dia iray amin’ireo dikan-tsarimihetsika tsy ofisialy indrindra alaina amin’izao fotoana izao, izay lasa malaza amin’ny mpampiasa Iraniana, ary ny isan’ny fampidinana an-tsena an’ity fampiharana ity dia mampiseho fa ao anatin’ny fotoana fohy dia afaka mihoatra noho ny hafatra an-gazety an-trano miaraka amin’ny fitaovana Tomans an’arivony tapitrisa. Ity fampiharana ity, tsy toy ny dikan-teny tsy ofisialy hafa an’ny Telegram, dia manana endri-javatra tena mahaliana ary tsy ampy hanovana ny endriky ny Telegram.
Fahaizana mikaroka horonantsary, horonan-tsary ary lahatsoratra amin’ny fantsona Telegram rehetra nefa tsy mpikambana ao amin’ny fantsona! Lahatsoratra mafana rehetra avy amin’ny fantsona rehetra tsy misoratra anarana amin’ny fantsona !! Ity programa ity koa dia manana drafitra manokana hampihenana ny vidin’ny fifamoivoizana amin’ny Internet finday. Ny mpiara-miasa voalohany dia afaka mahazo maimaim-poana ny lahatsoratry ny fantsona Telegram ambony. Ankoatr’izay, diniho ireto manaraka ireto, izay fanambarana ofisialin’ny mpamorona an’ity fampiharana ity:
Ny kaody an’ity iraka ity dia natao tamin’ny fomba ofisialy tao Iran ary avo dia avo ny haavon’ny fiarovana ny Telegram ary tena mitovy amin’ny Telegram mihitsy. (Betsaka hatrany ny resaka momba ny fiarovana an’ity fampiharana ity)
Afaka mampiasa azy mora foana ny olona ary manana hafainganam-pandeha avo lenta sy kalitao.
Ny olona rehetra nanoratra robots ao amin’ny Telegram dia afaka mampiasa robots mitovy amin’ny Telegram.
Ny olona rehetra izay manana mpikambana ambony ao amin’ny fantsona sy vondrona misy azy, dia namolavola fepetra izay azon’izy rehetra ampiasaina ao amin’ny Telegram.
Fametrahana sy famerenana ny fampiharana Golden Telegram 2020
Heveriko fa tsy ilaina ny manazava ny dingana amin’ny fametrahana sy fandefasana ny kaody fanamarinana. Aorian’ny fampidinana sy fametrahana ny fampiharana, ny hany tsy maintsy ataonao dia manome nomeraon-telefaona ho an’ny programa ary misy kaody fanamafisana halefa aminao.
Hiditra amin’ny programa ianao amin’ny fampidirana ny kaody fanamarinana. Ny sary etsy ambany dia mifandraika amin’ny tontolo Golden Telegram.
Mifandray amin’ny habaka Golden Telegram, tsy isalasalana, ny iray amin’ireo endri-javatra manintona indrindra izay nampidirin’ny Telegram vao haingana tamin’ny dikan-teny tany am-boalohany dia ny fahafahana mametraka chat. Ao amin’ny telegrama lehibe, ity endri-javatra ity dia manual tanteraka ary manana endri-javatra manokana.
Golden Telegram koa dia manana sokajy robot, chat malaza, vondrona, supergroups, fifandraisana, fantsona ary ny chat rehetra amin’ny alàlan’ny default. Araka ny voalazanay dia nampidirina vao haingana tamin’ny dikan-tsarimihetsika Telegram ity endri-javatra ity. Ankoatr’izay, tsy zavatra hafahafa izany eo amin’ireo dikan-teny tsy ofisialy, ary efa ela i Mobogram no afaka nanasokajy ny chat.
Ghost mode sy automatique proxy switching
Raha manana tsikera roa lehibe amin’ny Telegram tany am-boalohany ireo mpankafy ny dikan-teny tsy ofisialy amin’ny Telegram ary, tsara kokoa, fialan-tsiny roa amin’ny fampiasana ireo dikan-teny tsy ofisialy; Ireo roa ireo dia ny tsy fahampian’ny toe-tsaina sy ny olana amin’ny fiatoana proxy sy ny fifandraisana ary ny olana mifandraika amin’ny VPN.
Ity olana ity, na izany aza, dia voavaha tamin’ny trangan’ny Telegram Golden. Ao amin’ny bara ambony amin’ny fampiharana, ary eo amin’ny zoro havanana amin’ny sary dia hahita sary masina ianao.
Ny kisary voalohany dia ny maody matoatoa, izay ahetsiketsika amin’ny fikitihana iray ary tapaka amin’ny famerimberenana ny hetsika mitovy. Tena manintona olona maro ny maody Ghost ary ny dikan-teny tsy ofisialy an’ny Telegram miaraka amin’ity endri-javatra ity dia nitondra mpankafy maro ho azy ireo.
Fa ny tranga faharoa izay niriako dia tao amin’ny dikan-teny tany am-boalohany ao amin’ny Telegram, mifandraika amin’ny proxy. Iray amin’ireo olana sedraiko manokana ary mety efa niainan’ny olon-kafa, ny olana momba ny proxy amin’ny telegrama lehibe.
Ny tiana holazaina dia ny fampiasana proxy dia mora kokoa sy mora kokoa noho ny fampiasana mpanapaka sivana izay very ny asany sy ny fahamendrehany ao anatin’ny fotoana fohy.
Saingy ny famadihana ireo fantsona mpamatsy proxy sy ny fitadiavana proxy izay miasa tsara mandritra ny iray na roa andro farafahakeliny ary tsy mampiadana ny fampidinana sy ny fampiakarana ny hafainganam-pandeha dia mety ho mandreraka sy mandany fotoana. Efa nitranga imbetsaka izany fa imbetsaka tao amin’ny fantsona proxy no nandaniako fotoana betsaka tamin’ny fitadiavana ny proxy mety, izay mety ho namaly tao anatin’ny iray andro latsaka.
Amin’izay fotoana izay ihany koa dia tokony handinika ny lisitry ny proxy ianao ary avelao izy io indray mandeha ary ampio ireo proxy vaovao amin’ny tanana.
Fa ny Telegram Golden dia manolotra anao endri-javatra mandeha ho azy izay tsy mila manelingelina anao intsony. Ny lisitry ny proxy dia azo alaina ho azy ho anao, ary amin’ny fikasihana ny safidy faharoa avy eo ankavanana eo amin’ny bara ambony amin’ny fampiharana dia azonao atao ny mamaha ny olana amin’ny fanapahana na fifandraisana na fifandraisana malemy.
Amin’ny fikasihana ity safidy ity dia ho hitanao ny sary etsy ambony, izay ankoatra ny fanazavana momba an’io endri-javatra io, dia manome anao safidy roa. Amin’ny lafiny iray, amin’ny alàlan’ny famindrana ny safidy fanovana proxy dia mifindra any amin’ny proxy tsara kokoa avy amin’ny lisitra ianao. Raha tsy voavaha amin’ny fanovana vitsivitsy ny olana dia vinavinaina ny vahaolana, ny fanavaozana ny lisitry ny proxy dia mety hamaha ny olana.
اطلاعات جدیدی از گلکسی M42 فاش شد
Mazava ho azy, raha tsy te hampiasa an’io endri-javatra io ianao dia azonao atao ny mampiasa ny safidy fikandrana proxy, esory ny rafitra proxy sy ny fifandraisana marani-tsaina, ary mikaroka sy mifantina proxy.
Raha mijery ny menio midina eo ankavian’ny Telegram ianao dia hahita safidy tsy tambo isaina izay ho vaovao aminao. Ohatra, fifandraisana manokana, olona akaiky, resaka miafina na fitantanana fampidinana. Saingy ny iray amin’ireo safidy ireo, izay mety ho tena ilaina, dia ny safidy hafahafa amin’ny mpanadio banga.
Tokony ho nahafantatra ny anarany aho, saingy tsy azoko tamin’ny voalohany. Amin’ny ankapobeny, rehefa feno loatra ny fitadidiako ny findaiko ary sendra tsy an-kijanona ilay fitaovana fampitandremana fa tsy ampy ny toerana, ny iray amin’ireo dingana fototra ataoko dia ny mijery ny fitadidiana ny fitaovana ary mamafa ny fampahalalana, sary, horonan-tsary ary rakitra telegrama maro. Tsy ampiasaina intsony izy ireo.
Ity dia manome habaka malalaka vitsivitsy farafahakeliny. Ao amin’ny Telegram Golden, azonao atao ny mamafa ireo entana ireo amin’ny alàlan’ny programa ary mampiasa ny endri-javatra mpanadio banga, ary aza avela ho very maina ny habaka fitadidiana anatiny amin’ny fitaovana marani-tsainao.
Endri-javatra manokana sasany amin’ny Golden Telegram
Ny dikan-teny tsy ofisialy an’ny Telegram, ankoatry ny endri-javatra fototra amin’ny Telegram, dia manolotra endri-javatra mandroso kokoa ho an’ny mpampiasa, ka maro ireo mpampiasa no mandray an’io olana io ary mitodika amin’ny fampiasana ireo dikan-teny ireo.
Amin’ny lafiny iray, ny dikan-teny tsy ofisialy toa ny Golden Telegram miaraka amin’ny interface tsara mpampiasa azy dia nahasarika karazan-tsiro isan-karazany. Ohatra, ho an’ny vehivavy, ny loko izay malaza indrindra amin’izy ireo sy ny dikan-teny hafa. Ny endri-javatra manokana sasany amin’ny Golden Telegram dia toy izao manaraka izao:
Asehoy hoe iza no manana ny nomerao findainao
Asehoy ireo mpampiasa an-tserasera
Fahaizana mifidy endri-tsoratra
Mandehana any amin’ny hafatra chat voalohany
Resaka UI nohatsaraina ary tsy misy fampahafantarana miafina
Fanohanana feno ny fiteny persianina, ny datin’ny masoandro ary ny endrika 24 ora
Fahaizana mamolavola sy mandoko ny rindrambaiko ary mizara amin’ny mpampiasa hafa
Fomba tablette (mifanaraka amin’ny karazana takelaka isan-karazany) Amin’ny maodely landscape, miova ny endriky ny programa
Sokafy ny hafatra araka ny karazana (fifandraisana, fantsona, vondrona, bots)
Mitadiava olona akaiky anao
Manorata fifandraisana manokana
Afeno ny chat manan-danja sasany
Dika tsy ofisialin'ny Telegram Sivana telegrama Telegrama volamena
بررسی تمام تجربه‌های بازیگری دیوید لینچ به بهانه حضورش جلوی دوربین اسپیلبرگ